Wasiirada Haweenka Puntland oo sidiiran loogu soo dhaweeyay Dueledka Garoowe+Sawiro – SBC
Wasiirada Haweenka Puntland oo sidiiran loogu soo dhaweeyay Dueledka Garoowe+Sawiro
Wafdi ay horkaceyso wasiirada Wasaarada Arimaha Haweenka Puntland ayaa maanta lagu soo dhaweeyay duleedka magalada Garoowe xarunta Puntland .
Wasiirada Haweenka Puntland Xaliimo Xaaji Xuseen iyo Wafdigeeda oo uu ka mid ahaa Wasiir ku xigeenka Arimaha gudaha Puntland waxa ay ka soo kici timeen magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug halkaas oo ay ka soo dejisay diyaarad ay ugaga yimaadeen dhankaas iyo dalka Mareykanka.
Haween haad u tiro badan oo ka kala socday ururada haweenka, shaqaalaha Wasaarada Haweenka iyo dadweyne kale ayaa kaga hortagay wasiirada iyo wafdigeeda duleedka magaalada Garoowe waxaana ay halkaasi ugu sameeyeen soo dhaweyn balaaran.
Wasiirada Haweenka Puntland Xaliimo Xaaji Xuseen ayaa ka dib soo dhaweyn isla duleedka Garoowe kula hadashay dadkii soo dhaweeyay, iyadoona ugu horeyn ka mahad celisay soo dhaweynta balaaran ee loo sameeyay .
Safarka wasiirada ay kaga timid Dalka mareykanka waxa uu noqonayaa keedii ugu horeeyay tan iyo intii loo magacaabay xilka wasiirnimada Haweenka Puntland .
zahara Ak says:
I dont think that Madam Halima can be a hero just like our EX minister Aisha Gele,
umalayn maayo in ay gaari doonto wasiiradi hore ee murwo caasho geele ,lkn ilaah waxan ka baryeeyna in uu nooga dhigo mid khar
wixii maamul yimaada puntland waa tuug kii loodhiibaab wuxuu urursadaa lacagta waxaa jirta maalin lagu xisaabi naayo oo aadan awood lahayn hooy tuugada iskadaaya gaara ahaan madaxad reer puntland faroolena xilka halaga dhige oo halgu celiyo tagsigii yurub
dadkaan caytamaya afkiina edeb u yeela qof iinaan aqoon waxba haka sheeginina waxyar ayayba joogta wadanka wax qabadkeeda suga markaas wax ka sheega. caasho geele gobolka mudug bay kasoo jeedaa waligeedna wax uma qaban marka dacaayada raqiiska ah joojiya
mida kale allsbc xaliima haji hussein ma ahan ee waa xaliimo hassan osman